မင်းသမီးဒိုင်ယာနာနဲ့ ... Meghan Markle အကြားဆက်သွယ်မှု - မသာမင်းသားဟယ်ရီဖြစ်ပါသည်
အဘယ်အရာကိုအံ့သြဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကံကြမ္မာ "ပစ်"! ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အတိုင်း, မင်းသမီး Meghan Markle နှင့်ကွယ်လွန်သူမင်းသမီးဒိုင်ယာနာမင်းသားဟယ်ရီများအတွက်စိတ်ရင်းခံစားချက်များကိုသာချိတ်ဆက်ပေမယ့်မမျှော်လင့်ဘဲတစ်ခုခုနေကြသည်။
အဆိုပါ Vanity Fair ၏ publication (@vanityfair)
mom မင်းသားနဲ့သူ့ရည်းစားအတူတူမိတ်ကပ်အနုပညာရှင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမာရိသညျ Grinvell အကြောင်းကိုပါပဲ။ သူမ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာနှင့်အတူ Vogue နှင့် Vanity Fair စာပေအဖုံးဖွင့်အရသာထွက်လှည့်။ တီဗီစီးရီး "အင်အားသုံး majeure" ၏ကြယ်ပွင့် Vanity Fair အဘို့နှင့်ကအားလုံးကိုတူညီတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်လမ်းပေါ်အဖုံးမိန်းကလေးမစ္စစ် Grinvell ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာတစ်ဦးအမေရိကန်မင်းသမီးလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန် photoshop နဲ့ကုသသူမ၏မျက်နှာကြိုက်နှစ်သက်တော်မမူကြောင်းလူသိများသည်။ သူမသည်တင်းတိပ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမကသူတို့ကိုရှက်ကြောက်မရှိ, ထို့ကြောင့်တစ်ဦးလွယ်ကူသောနှင့်သဘာအောင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ရွေးချယ်မှုမာရိက Megan ပေါ်မှာလှဲအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်မည်သူမဆိုထက်ပိုသဘာဝပြင်ပဒေတာကိုအလေးပေးသော, client များမျက်နှာနှင့်အတူမျိုးလုပ်ကိုင်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။
ရှေ့မှာ retouched အလွန်အကျွံစိတ်အားထက်သန်တွင်တွေ့မြင်မခံသောကြောင့်ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ်ပတေရုသ Lindbergh တိကျစွာရွေးကောက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါထင်ပေါ်ကျော်ကြားစာပေအဖုံးပေါ်မှာထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးမှ, သူမကစာနယ်ဇင်းသမားတစ်ဦးလင်းလင်းအင်တာဗျူးကိုပေး၏။ အထဲတွင်သူမမင်းသားနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စသူမ၏ရုတ်တရက်အလွန်ကျော်ကြား လုပ်. ဟယ်ရီဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ရန်ကိုရွေးတော်မဘာကြောင့်ဘယ်လို, "အထူးအပြာသွေး" နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်း၏အခွအေနဖော်ပြခဲ့သည်။
တစ်ဦးက key ကိုအစည်းအဝေး
အချိန်အလွန်လျင်မြန်စွာပျံဟယ်ရီနှင့် Megan တစ်နှစ်တွေ့ဆုံရန်! အဆိုပါမိန်းကလေးတော်ဝင်မိသားစုကိုလုံးဝနီးပါးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူကျွမ်းလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော်ဂရိတ်ဗြိတိန်၏အာဏာရဘုရင်မကြီးနှင့်အတူအထင်ရှားဆုံးအစည်းအဝေး, နောက်ဆုံးသောရန်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။ ဒီတော့အရေးပါသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ယခုလအစောပိုင်းကလည်းထိုစုံတွဲကသူတို့ရဲ့အာဖရိကအားလပ်ရက်ရာမှပြန်လာသောနှင့် Balmoral ရဲတိုက်မှဖြောင့်သွား၏။ သူမရဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်၏နွေရာသီနေအိမ်သို့စကော့တလန်မှာတည်ရှိပါတယ်အဖြစ်ကအခြားမဟုတ်ပါဘူး။
အတွင်းဘုရင်မကြီးနဲ့အသိအကျွမ်းတစ်ထစ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ထစ်ခြင်းမရှိဘဲပိတ်ထား သွား. အမေရိကန်အပတ်စဉ်သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ မင်းသားနဲ့သူ့ရည်းစားဟာဧကရာဇ်လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ကြီးစွာသောအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကံကောင်းအလှအပ Megan - ဆင်းရဲသောသူကိုမိန်းကလေးကိတ် Middleton တစ်ကြိမ်အဖြစ်အများအပြား5အဖြစ်နှစ်ပေါင်းမှာခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ခဲ့စဉ်သူမ, တစ်ခုလုံးယခုနှစ်တရားရုံးတရားဝင်တင်ဆက်မှုများအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါသည် ...
Kristen Stewart က၏အသက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏။ အဘယ်အသစ်ကစိတ်ခံစားမှုကော?
Kurt Cobain ၏ဇနီး
Kylie Minogue ယောရှုသည်saßမှသူမ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုချွတ်ဖျက်လေပြီ
Naomi Watts နဲ့ Liev Schreiber ၏သားတော် "သေကြောင်းကြံစည်မှု Squad" မှ Harley Quinn အဖြစ်ဝတ်ဆင်ရုပ်ပြ-Con မှာထင်ရှားလေ၏
Relationship Amber Heard နှင့်ဂျော်နီ Depp ဟာချုပ်ရိုးမှာကွဲအက်မဟုတ်ပါ
သူ Alicia Vikander နှင့်အော်စကာ 2016
Sandra Bullock အခြားကလေးကမွေးစားသလော
ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းအားသူ Alicia Vikander မြူးနစ်အတွက်ချွတ်ကန်
အရင်ကဆိုရင်များအတွက် technique ကို quilling
Aglaonema - မျိုးပွား
အဝလွန်ခြင်းဆန့်ကျင် Feng Shui
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ချွေးထွက် - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်